समाचार Archives - Page 1377 of 1381 - Dainik Online Dainik Online
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सहमत
तीन नेपालीको लिङ्ग काटेर हत्या गरेको अभियोगमा बोहरालाई हिरासतमा राख्न आदेश
एजेन्सी । भारतको पिथौरागढमा तीन नेपाली मजदूरको लिङ्ग काटेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली मजदूर धनबहादुर बोहरालाई १४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला न्यायालय पिथौरागढले अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौंको नाग पोखरीमा छठको भव्य तयारी
काठमाडौं । काठमाडौंको नाग पोखरीमा छठ पर्वको भव्य तयारी गरिएको छ । छठ पूजा मूल समारोह समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी कार्तिक १६ गते शनिबार नागपोखरीमा छठी माईको
UPDATE# प्रहरीको गोलीबाट युवकको ज्यान गएपछि कृष्णनगर तनावग्रस्त
कृष्णनगर । कर्फ्यू उल्लंघन गर्नेमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय एक युवाको मृत्युभएपछि कपिलवस्तुमा तनाव सिर्जना भएको छ । कर्फ्यू जारी रहँदा प्रदर्शन भएपछि प्रहरीले फायर गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालले निकाल्यो विज्ञप्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उपचार जारी रहेको ग्राण्डी अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको
गुह्येश्वरीमा छठको तयारी शुरु
काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठूला चाड तिहार सकिएसँगै पशुपति क्षेत्रस्थित गुह्येश्वरीमा छठ पर्वको तयारी शुरु भएको छ । गुह्येश्वरी छठ पूजा समितिले बाँस गाड्ने, घाट सजावटलगायत काम शुरु गरेको हो
नेवार समुदायले मनाए भाइटीका
काठमाडौं । नेवार समुदायले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गरी भाइटीका पर्व मनाएका छन् । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौँ दिन भाइटीका पर्व मनाइने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढ भएकाले कार्तिक शुक्ल
विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १७१ कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत साउनमा ६०, भदौमा
काठमाडौं । काठमाडौंको महाराजगञ्जबाट गत आइतबार २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ परेका २५ जना भीआईपी जुवाडेलाई थुनामुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको
प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डीको आईसीयूमा
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ग्राण्डी अस्पताल पुर्याइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघन उपचार कक्ष (आइसीयू)मा भर्ना गरिएको छ । ज्वरो आउने तथा टाउको दुख्ने समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल
सडक बिस्तारका लागि खनिएको खाल्डोमा परेर दाङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
सडक बिस्तार गर्ने क्रममा खनेको खाल्डोमा परेर दाङमा एक जना मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठक आज, यस्तो छ कार्यसूची
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज मंगलबार बस्दै छ। बैठक दिउँसो १ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ
आधिकारिकता पाएको भोलिपल्टै जसपाले बोलायो कार्यकारिणी बैठक, मन्त्रीको नाम टुंग्याउने तयारी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आज मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले
१३ दिनदेखि बेपत्ता सुमन अझै भेटिएनन्
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–६ का ३६ वर्षीय सुमन ढुङ्गाना १३ दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। गत असार ३१
मन्दिरको सुन चोरेको आरोपमा सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्षसहित सात जना पक्राउ
बैतडीको एक मन्दिरको सुन चोरीको आरोपमा सात जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये चार
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने
नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। बैठक आज मंगलबार बिहान १० बजे कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका
ठेक्कामा पहुँच वाला , कामअलपत्र !
अनेक पहुँच र विधि प्रयोग गरेर ठेक्का लिने तर काम नगर्दा जाजरकोटको विद्युतीकरणमा समस्या देखिएको
महन्थ ठाकुर सँग तीन विकल्प !
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर